» “विहे गरेको २० दिनमै ,भागेकी, बेहुलीलाई श्रीमानको सन्देश, यति छिटै धो’का दिनु थियो,भने किन विवाह गर्यौ ? (भिडियो हेर्नुस्)” “विहे गरेको २० दिनमै ,भागेकी, बेहुलीलाई श्रीमानको सन्देश, यति छिटै धो’का दिनु थियो,भने किन विवाह गर्यौ ? (भिडियो हेर्नुस्)” – हाम्रो खबर
“विहे गरेको २० दिनमै ,भागेकी, बेहुलीलाई श्रीमानको सन्देश, यति छिटै धो’का दिनु थियो,भने किन विवाह गर्यौ ? (भिडियो हेर्नुस्)”
“काठमाडौ । साउनको ३ गते म काममा जान्न भनिन् । उनी काममा नगएर बसेकी थिइन् । तर पछि अस्पताल जाउँ भन्दा म अलि ठिक हुँदैछु भनेर श्रीमतीले भनिन् त्यसपछि उनी काममा गए । तर जब उनी कामवाट घर फर्किए उनको श्रीमती कोठामा थिइनन् । विवाह गरेको २१ दिनमै श्रीमती त्यसरी हराएपछि एक युवा खोजीमा हिँडेका छन् । उनीहरु ज्याला मजदुरीको काम गर्थे ।”
“श्रीमती त गइन् तर कोठामा भएको पनि लिएर गएको श्रीमानको भनाई छ । उनले अहिले आफुले चिनेजानेको ठाउँमा खोजी गरिसके । तर श्रीमतीलाई कतै फेला पार्न सकेनन् । भर्खर विवाह गरेकी श्रीमती विवाहमा किनिदिएको गहना पनि लिएर गएको बताए । श्रीमतीले कोठावाट गएपछि पनि बारम्बार फोन भने गरिरहन्छिन् । तर तिमी कहाँ छौं भनेर सोध्दा उनले आफु बसेको ठाउँ भने बताउँदिनन् ।”
“उनीहरु दुवै जनाको दोस्रो विवाह हो । उनी पहिलो श्रीमानलाई छोडेर माइत बसेकी थिइन् गाउँकै भाउजुहरुले दुवै जना उस्तै भएका कारण एक अर्कासंग विवाह गर भनेर सुझाव दिएपछि आफुले विवाह गरेको बताउँछन् । भाउजुको बहिनी हो यस्तो धोका दिन्छिन् होला भन्ने लागेको थिएन । अझै पनि आए उनलाई श्रीमतीको रुपमा स्वीकार्ने बताएका छन् ।
“उनले काम गर्छु भनेर चटपटे पसल पनि खोलीदिएका थिए । तर पसल खोलेको दुई दिनमा उनले छोडेर हिँडेको उनको भनाई छ । उसको मनमा पहिला नै मसंग बस्ने मन थिएन भने किन विवाह गरिन् ? उनले त्यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् ।”